Nabil Bank Archives - Nagarik Today
होम » Nabil Bank
नबिल बैंकले दशैंको अवसर पारेर नयाँ ब्याजदर योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले दशैंको अवसर पारेर सुनौलो उपहारको रुपमा मुद्दती खातामा उत्कृष्ट ब्याजदरको बहार योजना ल्याएको हो । बैंकले असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ब्यक्तिगत मुद्दती खातामा ९.२६ प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध गराउने भएको हो।
नबिल बैंकले कमायो साढे ४ अर्बभन्दा बढी नाफा, २ खर्ब निक्षेप संकलन
नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकले अघिल्लो वर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढी खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ३ अर्ब ४६ करोड ३२ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको बैंकले यस वर्ष रू. ४ अर्ब ५० करोड ४४ लाखभन्दा बढी यो नाफा गरेको हो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा २६ दशमलव ३५ प्रतिशत बढी सञ्चालन नाफा गरेकाले पनि बैंकको नाफामा बृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष बैंकको इम्पेरमेण्ट चार्ज पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ८५ करोड ६७ लाखभन्दा बढी भएको इम्पेरमेण्ट चार्ज गत वर्ष रू. ६५ करोड ९९ लाख भन्दा बढी मात्र भएको हो । गत चौथो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा अघिल्लो वर्षभन्दा ३६ दशमलव २९ प्रतिशत बढी रू. ४ अर्ब १४ करोड ६२ लाखभन्दा बढी छ ।
३३ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ती पश्चात बैंकको चुक्तापूँजी रू. १३ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख ५१ हजार पुगेको छ । यो अवधिसम्म बैंकको जगेडा कोष रकम शेयर प्रिमियम र रिटेन्ड अर्निंग सहित रू. १९ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष बैंकको जगेडा कोष रकम २३ दशमलव ६४ प्रतिशत बृद्धि भएको हो ।
गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा १७ दशमलव १२ प्रतिशत बढी रू. २ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड ८० लाखभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ३३ दशमलव ८१ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब ९८ अर्ब १० करोड ७३ लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात गत वर्ष शून्य दशमलव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३२ दशमलव ५४ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २४० दशमलव ७३ छ । यस अवधिसम्म बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ४० दशमलव ६९ गुणा छ ।
नेप्सेमा ३६ लाख ४२ हजार कित्ता शेयर सूचीकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा शुक्रबार एक कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार शुक्रबार नबिल बैंक लिमिटेडको शेयर सूचीकृत भएको हो ।
नेप्सेका अनुसार नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेपछि नबिल बैंकको नामबाट ३६ लाख ४२ हजार ९ सय २१ दशमलव २६ कित्ता शेयर धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको हो । अब युनाइटेड फाइनान्सका शेयरधनीहरूको शेयर नबिल बैंकको नामबाट खातामा देखिनेछ ।
नबिल बैंकले ऋण कर्जाको लागि अनलाइनबाटै आवेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था सुचारु गरेको छ । बैंकले साना तथा मझौला कर्जा लिन चाहाने आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सो व्यवस्था शरू गरेको हो । बैंकका अनुसार इच्छुक ग्राहकले बैंकको वेबसाइटमा गई साना तथा मझ्यौला ऋण कर्जाको लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्ँ् ।
यो सुबिधा बैंकलार्ई डिजिटल बैंकमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप गरिएको हो र ग्राहकले आफुले चाहेको समय, स्थान र उपकरणमा बैंकिङ सेवाहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत ऋण कर्जाको लागि आवेदन दिनुहुने सिमित ग्राहकहरूलाई सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सुविधा बैंकद्वारा जारी अभियान ‘नबिल बैंक – गो डिजिटल प्रोग्राम, डिजिटल कारोबार आजको आवश्यकता’अनुरूप रहेको छ ।
बैंकले आफ्नो देशभर १३५ वटा शाखा कार्यालयहरू, १८३ एटिएम र १५०० भन्दा धेरै नबिल रेमिट एजेन्टहरूसहित विभिन्न देशमा रहेका एजेन्टहरुको बृहत सञ्जालमार्फत सेवा सुविधा प्रवाह गरिरहेको छ ।
नबिल बैंक लिमिटेडले आजदेखि ७ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गर्दै
by नागरिक टुडे साउन १०, २०७८
नबिल बैंक लिमिटेडले आजदेखि ७ वर्ष अवधिको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।
बैंकले जारी गर्ने ‘८ प्रतिशत ब्याजदरमा नबिल डिबेञ्चर २०८५’ नामको ऋणपत्र मध्ये १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि र १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्रि गर्ने जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्टाएको मध्ये ६० हजार कित्ता सामुहिक लगानीकोषको लागि छट्टाएको छ ।
ऋणपत्र खरिदको लागि न्युनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पुर्ण कित्तासम्मका लागि छिटोमा साउन १३ गतेसम्म र ढिलोमा २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
साउन १०, २०७८0comment